mairie-antananarivo – Fidinana ifotony nataon’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny tsenan’ny Besarety
Fidinana ifotony nataon’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny tsenan’ny Besarety
administrateur 9 aogositra 2018 Commentaires fermés
Ho vitaina ao anatin’ny 20 andro ny fanitarana sy ny fanatsarana ny tsenan’i Besarety ao amin’ny Boriboritany faha-3 eto Antananarivo Renivohitra, tsena isaky ny talata eto an-drenivohitra. Nidina ifotony nihaino ny fitarainan’ny mpivarotra sy ny mponina, nijery ny fanatsarana ny tsena tetsy amin’ny tsenan’i Besarety androany maraina ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy akaiky ao amin’ny fiadidian’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, notronin’ny solombavambahoaka voafidy tao amin’ny boriboritany faha-3. Natao izao fidinana ifotony izao, hoy ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana satria betsaka ny fitarainana tonga tany aminy vokatry ny tsy filaminan’ny tsenan’i Besarety ity.
Araka ny nambaran’ireo mponina sy ny mpivarotra dia efa misy ireo fanatsarana ny Tsenan’i Besarety, toy ny : ny fanamborana ny talantalan’ny mpivarotra , ny bassin, fananganana dabam-pako ary indrindra ny fanamboarana ireo tatatra misarona , ny fanavaozana ny Pavillon miisa 40. Teo koa ny fanamborana lalana rarivato na PAVE miditra ao an-tsena izay lalan’ny vahoaka mampifandray amin’ny Fonkontany 3 dia Besarety, Ampandrana Besarety, Ampandrana Antsinanana, izay mirefy 150 m, nampijaly ny mponina sy ny mpivarotra izany indrindra rehefa fahavaratra ny andro. Tafiditra ao anatin’ny fanamboarana ny tsena ihany koa ny fanavaozana ny tranom-pokonolona na ilay antsoina hoe Gymnase izay tokony hampidi-bola hoan’ny tsenan’i Besarety sy ny CUA.
Ankoatr’izay dia nanambara ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ny amin’ny handaminana ny “Parking” ka tsy tokony hisy intsony ireo fiara maty mipetraka ao anaty tsena. Tsy maintsy manadio sy mitandro ny fahadiovana koa ny mpivarotra sy ny mponina. Ireo mpivarotra mivoaka eny ivelany indray dia tsy maintsy miditra ao anatin’ny tsena avokoa rehefa vita ny fanamboarana ny tsena ary hisy fepetra ampiharin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ireo izay tsy manara-dalàna. Mbola hidina eny an-toerana ny ben’ny Tanàna afaka iray volana hijery ny fahavitan’ny asa fanamboarana satria fanavaozana no tanjona, hoy hatrany ny Ben’ny tanàna lalao Ravalomanana.